စစ်သွေး ကြွဟောင်းများနှင့်တိုက်ခိုက်မှုမှ အသက်ရှင် လွတ်မြောက်လာခဲ့သူများ တွေ့ဆုံပွဲ အင်ဒိ? - Yangon Media Group
စစ်သွေး ကြွဟောင်းများနှင့်တိုက်ခိုက်မှုမှ အသက်ရှင် လွတ်မြောက်လာခဲ့သူများ တွေ့ဆုံပွဲ အင်ဒိ?
ဂျကာတာ၊ မတ် ၁ ၊ အင်ဒိုနီးရှား၏ အကြမ်းဖက် မှုတိုက်ဖျက်ရေးဌာနသည် အစ္စလာမ္မစ်စစ်သွေြး<ွကဟောင်း ၁၂၄ ဦးနှင့်တိုက်ခိုက်မှုများမှ အသက် ရှင်လွတ်မြောက်ခဲ့သူ ၅၁ ဦးကို တွေ့ဆုံဆွေးနွေးစေခဲ့ကြောင်း မတ် ၁ ရက် ရိုက်တာသတင်းက ဆိုသည်။
ကမ္ဘာ့မူဆလင်လူဦးရေ အများဆုံးနိုင်ငံ အင်ဒိုနီးရှားတွင် အာဏာပိုင်များသည် အစွန်းရောက် ဝါဒများ လျော့နည်းပပျောက်ရေး ကြိုးပမ်းလျက်ရှိသည်။ အကြမ်း ဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးအတွက် နည်း လမ်းအသစ်များဖော်ဆောင်ရာ တွင် အင်ဒိုနီးရှားတွင် ဦးဆောင် လျက်ရှိသည်။
စစ်သွေြး<ွကဟောင်းတစ်ဦး က မိမိတို့ကြောင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရခဲ့သူများနှင့်တွေ့ဆုံခြင်းကြောင့် အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများ၏ ဆိုးရွားပုံကို နားလည်သဘောပေါက် မိလာသည်ဟု ပြောသည်။
လူ ၂ဝ၂ ဦးသေဆုံးခဲ့ရသော ၂ဝဝ၂ ခုနှစ် ဘာလီကျွန်း နိုက် ကလပ်ဗုံးခွဲမှုများတွင် အပြင်းအထန် မီးလောင်ဒဏ်ရာရခဲ့သော Chusnul Kotimah က အဆိုပါ တိုက် ခိုက်မှုကျူးလွန်သူများကိုခွင့်လွှတ် ရန်ပြင်ဆင်ထားသည်ဟု ပြော သည်။
”အဲဒီအခြေအနေကို ကျွန်မ လက်ခံနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်မ သူတို့ ကို ခွင့်လွှတ်ပေးနိုင်ပါတယ်”ဟု ¤င်းက ပြောသည်။ အစ္စလာမ်ဘာ သာဝင်တစ်ဦးအနေဖြင့် ထိုကဲ့သို့ သော အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများကို ကျူးလွန်ခွင့်မရှိဟု စစ်သွေြး<ွက ဟောင်းများကို တွေ့ဆုံပွဲတွင် ပြော ခဲ့သည်ဟုလည်း ¤င်းက ဆိုသည်။
အသက်ရှင်လွတ်မြောက်သူများအဖွဲ့တစ်ခု၏ အကြီးအကဲ Sucipto Hari ကမူ အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲကို မိမိသဘောမကျကြောင်း၊ လွတ်မြောက်ခဲ့သူများအတွက် စိတ်ဒဏ်ရာပြန်လည်ရရှိစေနိုင် ကြောင်း ပြောသည်။ အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုများမှ အသက်ရှင်လွတ် မြောက်ခဲ့သူများကို အစိုးရက လုံလုံ လောက်လောက်မထောက်ပံ့ဟု ဝေဖန်သူများလည်း ရှိသည်။
လုံခြုံရေးဝန်ကြီး Wiranto ကမူ ထိုကဲ့သို့သောတွေ့ဆုံပွဲများ မကြာခဏကျင်းပစေလိုကြောင်း ပြောသည်။ ထိုဆွေးနွေးပွဲသို့ လူမှု ရေး၊ ပညာရေးနှင့် အလုပ်သမား ဝန်ကြီးများလည်းတက်ရောက်ခဲ့ ကာ အသက်ရှင်လွတ်မြောက်ခဲ့သူ များကို ပိုမိုထောက်ပံ့ကူညီမည်ဟု ကတိပေးခဲ့ကြသည်။
သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်အပိုင်း(ခ)တွင် ကန်ဒေါ်လာ ၈၅ သန်းဖြင့် သံမဏိစက်ရုံလုပ်ငန်း ဂျပန်ကုမ္ပ??
အိုင်ယာလန်နိုင်ငံတွင် ၃၆ နှစ်အတွင်း အဆိုးရွားဆုံး နှင်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်
အထုတ်ခံရခြင်းထက် ရလဒ်များအတွက်သာ အသင်းနည်းပြဆာရီ ပိုမို စိုးရိမ်မှုရှိ